Madaxweyne Deni oo daaha ka qaaday arrimo qarsoonaa | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Deni oo daaha ka qaaday arrimo qarsoonaa
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo xalay qabatay shir jaraa’id ayaa ka hadlay xaaladda uu ku sugan yahay waddanku, siyaasadda Farmaajo iyo damaciisa ku aaddan doorashooyinka.
GAROWE, Soomaaliya - Saciid Cabdullahi Deni oo shirkiisa jaraa’id uu qaatay in ka badan hal saac ayaaa si faahfaasan uga hadalay arriimo badan oo ku gadaaman xilliga kala guurka.
Deni, wuxuu ka sheekeeyay wixii dalka ka dhacay tan iyo markii uu yimid Madaxweynaha uu waqigu ka dhamaaday ee Farmaajo, wuxuuna carrabka ku dhuftay dhowr dhacdo oo anfariir iyo la yaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed.
Saciid Cabdullahi Deni wuxuu shaaca ka qaaday in Farmaajo in ka badan labo jeer inta soo wacay uu yiri dadka Xamar dagan xoog ayaan ku heystaa mana hadli karaan oo kii iga hor yimaadana waan dilayaa ama waan xirayaa.
Madaxweyne Dani wuxuu ka shifay siro badan oo Farmaajo u duugan wuxuuna caddeeyay in uusan u socan doorasho la is la ogolyahay ooo xalaal ah, isla markaana uu doonayo muddo kordhin ama doorasho boob ah.
Ciidamada Gor-gor ayuu sheegay in Fahad iyyo Farmaajo u tababareen sida Al-Shabaab oo kale oo ay yihiin kuwo aan sharciga dhowrin qofkii loo dirana ay qaarijiyaan.
Qodbada Dani oo meelo badan taabaneysay wuxuu ku xusan in siyaasiyiinta ka soo hor jeedda Frmaajo ee uu isagu ka mid yahay aysan Muqdisho isku hallayn karin oo xitaa cuntada Magaalada aan la cuni karin oo in sun lagu daro laga cabsanayo.
Kooxda Villa Soomaliya joogta ayuu la bar-bar dhigay Al-Shabaab, wuxuuna yiri, “Ma Al- Shabaab ayaan ka baqnaa mise Villa Soomaaliya ayaan ka cabsanna”.